Ngaba ufuna ukuthumela isicelo njengomfuduki onobuchule kakhulu?
Umthetho wokufudukela kwelinye ilizwe » Unemigangatho ephezulu yokufuduka - umthetho wokufudukela kwelinye ilizwe
Iskimu sokufuduka kolwazi kwimigaqo-nkqubo yomphambukeli wamaDatshi senza ukuba iinkampani zikwazi ukutsala abantu abafudukayo ngokukhawuleza kwaye kulula. Abasebenzi abaneziqinisekiso eziphezulu abaphuma kumazwe angaphandle kwe-European Union banokusebenza eNetherlands ngokomzekelo isikhundla esiphezulu solawulo okanye njengengcali phantsi kweemeko ezifanelekileyo zesikimu.
NGABO ISICELO SEBENKELEKILEYO YOMGANGATHO OBALASELEYO?
Unemigangatho ephezulu yokufuduka - umthetho wokufudukela kwelinye ilizwe
Iskimu sokufuduka kolwazi kwimigaqo-nkqubo yomphambukeli wamaDatshi senza ukuba iinkampani zikwazi ukutsala abantu abafudukayo ngokukhawuleza kwaye kulula. Abasebenzi abaneziqinisekiso eziphezulu abaphuma kumazwe angaphandle kwe-European Union banokusebenza eNetherlands ngokomzekelo isikhundla esiphezulu solawulo okanye njengengcali phantsi kweemeko ezifanelekileyo zesikimu. Nangona kunjalo, bobabini abafudukayo bolwazi kunye nomqeshi kufuneka bahlangabezane nenani leemeko.
> Iimeko ezinobuchule bokufuduka
> Cela umfuduki wolwazi
> Ikhadi leBlue European
Iimeko ezinobuchule bokufuduka
Ngaba ungumfuduki wolwazi kwaye uyafuna ukufaka isandla kuqoqosho lolwazi lwesiDatshi? Ukuba kunjalo, uya kuqala udinga imvume yokuhlala. Ngaphambi kokuba unikwe imvume yokuhlala, kufuneka ube nesivumelwano somsebenzi nomqeshi okanye iziko lophando eNetherlands elonyulwe yi-IND njengomxhasi ovunyiweyo kwaye libandakanyiwe kwirejista yoluntu yabaxhasi abaziwayo. Kuya kufuneka uphinde uzuze umvuzo owoneleyo kwaye kufanele ukuba uvumile ngomvuzo ohambelana nemarike kunye nomqeshi wakho.
Ukongeza, iimeko (ezongezelelekileyo) zisebenza kuwe njengomfuduki onezakhono eziphezulu. Zeziphi iimeko ezixhomekeke kwimeko yakho. Kwi Law & More, Amagqwetha okufudukela kwelinye ilizwe anokukhawulezisa kunye nendlela yobuqu. Baya kuvuyela ukukunceda kwisicelo sakho. Phambi kokuba uqhubeke nesicelo, iingcali zethu ziya kukubonelela ngalo lonke ulwazi oluyimfuneko ukuze ungayi kujongana nayo nayiphi na into emangalisayo.
Ayisiyiyo kuphela, kodwa nenkampani apho uya kusebenza khona kufuneka ihlangabezane neemeko ezithile. Ngaba yinkampani efuna ukuqesha umhambi onobuchule kakhulu? Kwimeko enjalo, kufuneka kuqala waziwe yi-IND njengomxhasi. Ukuthembeka kunye nokuqhubeka kwenkampani yakho kubalulekile. Ngaba inkampani yakho yamkelwa njengomxhasi? Kwimeko enjalo, inkampani yakho kufuneka ihambisane nezi zibophelelo zilandelayo: umsebenzi wolawulo, umsebenzi wokubonelela ngolwazi kunye noxanduva lwenkathalo. Ngaba inkampani yakho iyasilela ukwenza njalo? Ukuba kunjalo, oku kungakhokelela ekurhoxisweni kokubonwa njengomxhasi.
Ngaba uyafuna ukufudukela eNetherlands? Fowunela uncedo lomthetho
Cela umfuduki wolwazi
Unikwe imvume yokuhlala? Ukuba kunjalo, ixesha lokuvunywa kwemvume yakho yokuhlala liya kuba lilingana nexesha lekhontrakthi yakho yengqesho kangangesithuba seminyaka emi-5. Imvume inokwandiswa ngokungenasiphelo.
Ngexesha lokuqinisekiswa kwepemethe yokuhlala, unokutshintsha umqeshi njengomhambi onobuchule kwaye ujoyine enye inkampani eyamkelwa yi-IND njengomxhasi. Bobabini abadala kunye nomqeshi omtsha kufuneka banike ingxelo ngokutshintsha komsebenzi kwi-IND kwisithuba seeveki ezine.
Ngaba uba ngumsebenzi onobuchule bokufuduka? Kule meko, unelungelo lokufumana ixesha lokukhangela kwiinyanga ezintathu ukusuka kumhla wokupheliswa kwengqesho. Ukuba awukwazi ukujoyina omnye umqeshi (umxhasi) njengomfuduki onobuchule ngexesha lokukhangela, i-IND iya kuyirhoxisa imvume yakho.
Ikhadi leBlue European
Ukusukela ngoJuni ka-2011, umfuduki onobuchule uya kufaka isicelo se-EU Blue Card (i-EU Blue Card) ukongeza kwimvume yokuhlala. I-EU Blue Card yindawo yokuhlala edibeneyo kunye nemvume yokusebenza yabafuduki abanezakhono abanobume belizwe elinye lamaLungu e-EU.
Ikhadi laseYurophu eliluhlaza linikezela kubafuduki abanezakhono ezininzi iinzuzo. Okokuqala, umqeshi womfuduki onobuchule kakhulu akufuneki aziwe yi-IND njengomxhasi. Ukongeza, njengomfuduki oqeqeshiweyo onobuchule, obambe iKhadi ye-Blue Blue, ungasebenza kwelinye iLungu leLungu emva kokusebenza eNetherlands kangangeenyanga ezili-18, ngokuxhomekeka ekubeni uyahlangabezana neemeko zelo Lungu leLungu.
Ukuze ufaneleke kwiKhadi ye-Blue Blue yaseYurophu, kuya kufuneka uhlangabeze iimeko ezinzima kunakwimvume yokuhlala njengabafuduki abanobuchule. Umzekelo, kuya kufuneka ube nemvumelwano yengqesho kangangeenyanga ezili-12 okanye ngaphezulu, ugqibe ubuncinci inkqubo yeminyaka emithathu yemfundo kwizikolo eziphakamileyo (hbo) kwaye ufumane ubuncinci umvuzo weKhadi leBlue ngenyanga.
Iqela lethu lamagqwetha afudukayo aya kukukhokela kwaye angenise isicelo sakho kwi-IND. Ngaba ungayithanda le nto okanye unayo eminye imibuzo kwaye ungathanda ingcebiso? Nceda unxibelelane Law & More. Siya kukuvuyela ukukunceda.